Mudara raTinashe Muchuri: September 2013
Kunyorera vana iye zvino (Writing for children now) ZIBF 2013 Writers Workshop
Hurukuro dzemusangano wevanyori dzichaitwa panguva yezviratidzwa zvemabhuku zveZimbabwe International Book Fair (ZIBF) zvichange zviriyo muHarare kubva musi wa5 Gumiguru 2013 dzichange dzichifamba nedingindira rinoti ‘kunyorera vana iye zvino’.
Dingindira iri rindibata zvikuru nokuti pandinofamba ndichitsvakira mwanakomana wangu mabhuku ekuti adzidze kubva mukuona mifananidzo ndinoona mabhuku ezera rake andinona akanyorwa navanyori vekunze kweZimbabwe. Mifananidzo iri mumabhku acho ndeyezviwakwa nezvipuka zvekunze kweZimbabwe. Zvinorumbidzwa zvacho ndezveikoko zvakare. Pfungwa dzinobuda muzvinyorwa izvi ndedzekunobva zvinyorwa izvi. Hazvina hazvo kushata kuti vana vadzidzewo zvekune dzimwe nyika. Mazuva ano pasi rose zvarangova seruwa rumwe chete kuburikidza nokushandiswa kwedandira munyika zhinji dzepasi rino zvakanaka chose kuti vana vawane ruzivo netsika namagarriro evavakidzani muruwa urwu. Asizve zvinonzi zano pangwa une rako! Zvino vana vedu vanopangwa vasina kana nezano zvaro.
Padandira pacho pamadanemutande mazhinji panonyorwa nechiRungu. Kana aripo mandandemutande anonyorwa nendimi dzemuZimbabwe haazadzi chanza chimwe zvacho. Kuringa munyika ine mitauro yakawanda kudaro, unobva washaya kuti tiri kurasika papi chaipo sevanhu? Nguva ino yekuvapo kwedandira yaifanira kuva yakanakira nyika kuti ishandisewo mitauro yayo kuitira kuti izivikanwe nevagari veruwa runonzi pasi rose urwu. Chakashata chingava chii kuti munhu adadewo nomutauro wake? Vaimbi ndivo vasara vari mundima yokusumudzira mitauro yemuZimbabwe. Kunyange vakaenda kundoimba kunze kwenyika havaimbi dzimbo vachiturikira.
Handidi kurashika nyaya yaita ndinyore chinyorwa chino. Nyaya yokunyorera vana nyaya dzokuverenga iye zvino. Mumazuva ano vana vava kudzera nguva yavo refu padandira. Vana vazhinji vanenge vari paWatsapp, Facebook nezvimwewo zvakadaro zvinowanikwa padandira. Padandira pane vanhu vakasiyanasiyana. Vamwe vacho vanombunyukidza dandira nenzira yokunyora zvisina maturo. Izvi ndizvo zvinosangana navana vachiverenga. Zvizhinji zvisina zera navo. Nenyaya yekuti vana vanenge vachida shamwari dzokuseka nadzo vanowana dzimwe shamwari dzisiri dzezera ravo. Zvizhinji zvinenge zvichikurukurwa zvinenge zvisiri zvezera ravo. Zvimwe zvacho zvinoita kuti makurire namafungire avo asava akarongeka.
World Readers iri kuita izvi kubudikidza nokukurudzira vanyori kunyora nyaya nendimi dzavo idzo dzinozoiswa padandira uye munharembozha kuti vana vawane kuverenga nyaya dzavo mururimi rwavo. Zvinyorwa zvacho zvinenge zvine mifananidzo yezvivakwa mhuka navanhu vemuZimbabwe? Izvi zvinoita kuti vana vagone kukura vachidada nezvavari.
Tikatarira mafirimu anoonekwa nevana pachivhitivhiti muZimbabwe, panoonekwa kuti hapanawo zvapo mafirimu akagadzirirwa vana. Mazhinji acho ndeevanhu vakuru. Acho evana anobva kune dzimwe nyika zvakare. Vana vazhinji havachavenga mabhuku vava kuda kuita ruzivo rwokuona. Izvi zvinoita kuti vana vemuZimbabwe vazivisise zvenyika dzokunze kudarika yavo. Sakiso iriyo yokuti zvavanoverenga nokuona zvine mazita ekunze kwenyika. Mukudai hapana chatagonera rudzi rwamangwana. Kana vana ava vazoshanya kunyika dzekunze idzi havana chavangagoverana navamwe vana vezera ravo vekunyika dzekunze idzi. Zvinovapa urombo uye vapemhi hupemhi husingaperi. Vana vanoramba vachingova vashuzhi nokuti havana pukuvazhawo ruzivo rwemumusha mavo. Vakuru vavo vakavapira gotsi.
Vatambi vemitambo yekuyedzesera vanoshandiswa mitambo yakanyorwa nevanyori vekunze kwenyika. Mitambo yemuno haiwanikwi. Kashoma kuiwana iri mumabhuku. Mizhinji inowanikwa mumabhuku ndeyevanhu vakuru. Pane kuti vaone nekutamba mitambo yevana vanoona nekutamba mitambo yevanhu vakuru. Vana vanotaura neizwi remunhu mukuru kunyange paya pavanoita nhetembo pamagungano chaipo. Pane kuti vaone nokutamba mitambo ine chekuita neupenyu, tsika namagariro avo vanodzidza zvekune dzimwe nyika zvogazvoga. Zvino kana vana vomhanyira tsika dzavanoona zvingava zvinokahadzisa here? Ruzivo rwavanarwo ndirwekugoka. Rwavo hwava!
Vana vanoda kunyorerwa iye zvino sekureva kwedingindira rehukuro dzichaitwa nevanyori pamusangano wavo munguva yeZIBF. Mukupemberera makore makumi matatu zviratidzwa zvemabhuku zvichitwa uyewo iyo nyika yava nemakore makumi matatu namatatu yasununguka, vana veZimbabwe vanofanira kudzidza chii? Mutauro wavo ndeupi? Vanyori vonyorera vana nomutauro upi? Vovanyorera nechiShona here, siNdebele here, Xangani here, Tonga here, Kalanga here, Nyanja here, Venda here, Nambya here kana kuti nechiRungu? Ndeyipi nzira ingashandiswa kuti nyaya dzisvike kuvana? Izvi zvimwe zvezvimwe zvinofanira kukurukurwa.
Vanyori ndivo vanosvinudza kana kupofomadza nyika. Kana vanyori vasinganyoreri vaduku kureva kuti nyika yapofomara. Mafungiro nemaitiro enyika haachazi etsika dzenyika iyoyo asi ekukwereta. Kana vanyori vakanyora nyaya dzavana nyika yasvinura nokuti vanogona kumira vachidada nezvekwavo.
Hurukuro yakadai inodawo vatsikisi vemabhuku nevanotungamira zvirongwa pachivhitivhiti varipo. Kusavapo kwavo kungava kubika sadza mbodza. Ndivo vane masimba ekuti zvinyorwa zvevanyori zvigone kusvika kuvana. Hongu hazvo vamwe vanogona kuti nekuvapo kwedandira kana ari mabhuku kana mafirimu hazvichanetsa kuburitsa kunyika, asizve pane dambudziko reuwandu hwevanhu vanogona kuva padandira. Magetsi anoti netsei, mari yekubhadhara kuti munhu ave padandira inonetsa saka vana vanoponera kumabhuku anobatika. Kuti munyori asazviunganidzire zinomunetsa, zvakanaka kuti ashande navanotsikisa mabhuku pamwe naavo vanoita zvirongwa zvepachivhitivhiti kushambadzira basa rake.
Chikwereti hachizivi hama kana shamwari unotochibvunza
ZvaJoromiyo nhai. Nhasi ndini uyo ndomubvunzawo chikwereti chebasa raakati ndiite raasina kuripira. Ainge andivimbisa kuti aizoripira basa racho masvondo maviri adarika. Ndakatova nesvondo mbiri ndakamirira kuti aripire basa iri. Svondo yokutanga ndakambonyarara ndichifunga kuti kana naiye anofungawo semunhu ane chikwereti kuti muridzi wemari yake ave kuida. Pose pandakasangana naye pasvondo rekutanga aisambotaura nezvekuti chii change chamunonotsa kuti andiripire basa randakamuitira. Ndakanyarara ndichiti ndikabvunza pakaungana vanhu vanozoziva kuti shamwari yangu inonetsa pakuripa zvikwereti. Ndikadaro ndinenge ndamufumura kuvatorwa. Ndaitotyira kuti anozoshaya vokutamba nokushanda navo vanhu votya kuti munhu asingazadzisi zvivimbiso zvake.
Musvondo yechipiri ndimo mandakazomuchaira runhare svondo yotondopera. Ndipowo Joromiyo paaninditi, “Shamwari handisati ndawana mari. Vanhu vandaifunga kuti vangandipa mari vanoti vachatoisa mari maakaundi yangu asi zvinotora mazuva akati kuti isati yaratidza kuti yapinda muakaundi yangu. Saka ndichazokuchaira nhare kana zvaita.”
Ndakashamiswa nokuita kweshamwari yangu iyi yainge yandimanyisa kuita basa zvichiita sokuti kana ndapedza ndinobva ndangowana mari yacho chiriporipocho. Ndakakwidza izwi ndomurangaridza kuti dzainge dzatova svondo mbiri ndakamirira kuti andiripire basa randakamuitira kubva musi wainge avimbisa kuti ndiwo waazondipa mari yangu.
Joromiyo ndipo paanoti kwandiri, “Nhai shamwari wakazotanga kugona kupenga riniko nhai? Inga kubasa kwako vava nemwedzi mitatu vasati vakuripa wani? Ini ndingori nesvondo mbiri ndini wowoda kutsvusira meso here usingaatsvusiri iye vekubasa kwako.”
Paiva panhare. Ungaiteyi nemunhu wakadai. Ndakabva ndaona kuti chikwereti chikwereti zvechokwadi. Chinoda kutevrwa. Asi ikoko wotosunga moyo nokuti ukaenda moyo uri mutate unogona kukomoka neshungu wadirwa mweya wechidembo. Ndakafunga kuti heya saka kana ndichitamba neshamwari dzangu ndichiudza nhuna dzangu naidzowo dzinenge dzichitondirongera dhende. Kundirongera yakaora chaiyo. Dai aiva shamwari yangu handiti ingadai akanditi aiwa zvausina kuwana muripo wekubasa kwako chirega ndikubatsire. Ingadaizve akatondiripira basa randakamuitira nokukasika.
Joromiyo hameno kuti zvinouya sei kwaari. Kuita kwake ndokwekuda kusumudza moyo wangu. Kugumbura ndangariro dzangu. Ini hangu handidi zvokutaura zvakawanda asi handichaudzi munhu nhuna dzangu. Ndinovimba kuti kutaura naMwari kuri nani. Kuti naiye angandisungirawo misungo yakaita kunge yaJoromiyo here? Handina kuziva kuti pandaitaura kudaro ndainge ndaisati ndadambura nhare. Ndakainzwa iyewo oti, “Kana naiye achida kupfugamirwa, kurumbidzwa nokunamatwa zvinonetsa. Unogona kutozoona kuti ,kushanda navanhu vaunoona zuva nezuva kuri nane chose nokuti unogona kutaura navo muchipindurana, kwete izvi zvenyu izvi zvenyu izvi zvekupfugama. Muchaita mhanza pamabvi sembudzi asi chabudawe hwava! Handiti dai aikunzwa akatoita kuti ndikupe mari yako kare?”
Joromiyo anenge mweya weumhondi unoti kana wagara munhu haumusiyi kusvika munhu wacho aponda. Kana aponda wobva womutiza uchienda zvawo kurekure naye uko anosara ega iota kunge asina kusimira. Zvino oona kuti ropa ririkuyerera rateuka nokusada kwake. Ipapo anenge oti hameno change chakandibata. Mweya wetsvina. Joromiyo uri mweya wetsvina. Handidi hangu nemashoko angu akawanda asi uri mweya wetsvina chete. Ndichakudzokera, chirega ndndonamata zvangu ndisiyane newe. Zvawataura ndazvinzwa Mwari ndivo vanoona.
“Uchachembera uchingoti Mwari ndivo vanoona ziya rako richiteukira mahara. Mari yako inongoramba iri mumaoko evamwe. Kufa wakafuma nezvikwereti zvisingafi zvakauya kwauri. Panonzi vakakweretwa sumukai mutaure zvamaive makakweretwa pohaikwa kana munhu mumwe zviri zvechokwadi. Asi panozonzi vakakwereta sumukai tikounei poshaikwazve kana munhu mumwe anosumuka, asi ari manyepo. Hazvibatsiri izvi shamwari yangu. Sumukawo upopote unzikwe kuti ndiwe uripo.”
Joromiyoka iwe Joromiyo, usadaro.
Ndiye uyo Joromiyo mumanheru ari kupaumba. Kumuwana achipopota unofunga kuti atadzirwa muuro iwayo chaiwo. Izvo kwani, atadzirwa makore manomwe adarika. Anongova nazvo mumoyo hazvibudi. Paari kana wakamutadzira anosunga mafundo kunge chembere iri kusungira mari yevazukuru vayo youyu payo yega yeuyo payo yega. Chimwe nechimwe chifundo pamucheka wekumonera wayo chinenge chichitaura basa remuzukuru.
Hazvibatsiri vana vedu izvi. Ini ndinoshaya kuzviremekedza kana zvichinge zvadai. Ini pandaida kuenda kukoreji yekudzidzira kudzidzisa vana vane maspecial needs, ndakanzi ini handigoni kuendako nokuti ndaive ndisati ndakura. Ndaive ndisati ndapwa mhepo. Ndaifanira kudzidzisa vana vasinah urema kwemakore mana aya kana zvadaro ndozoenda kundodzidzira basa iri. Izvozvo anenge achisumudza minwe mina mudenga kuti vanhu vaone makore aakashanda akamirira kudzokera kukoreji kundodzidzira kudzidzisa vana vane hurema. Kana nharo dzokuti akandodzidzira izvi haudziwani. Anenge achitoona seari mukirasi yekudzidzisa vaya vane hurema hwekusanzwa nokutaura.
Zvino ndauya kuchikoro ndoti ini ndinoda kuva nekirasi yevana vasingaoni. Iyi kirasi ndaive ndaiwana pachikoro chemuHarare uko pedo neguta reHarare uko. Ndipowo pandinoudzwa kuti hapasati pava nenzvimbo. Pane kuti ndiende kubasa ndindobatsira vana ndakarambidzwa kwegore rose. Ndakamirira ndichidzidzisa vaya vaneh urema hwepfungwa dzakati dzikirei. Ndakamira navo ava kwegore rose. Kwaiva kundoodza moyo. Kuti ndigoti zvekudzidzisa vana vane hurema zvaramba. Ndakaramba ndimire ndichienderera mberi ndakamirira kuenda kundotora kirasi yangu yepachikoro chiya chiri pedyo neguta reHarare.
Kupera kwakaita gore kwakazoita kuti ndiende pachikoro chiya chiri pedo neguta reHarare. Pandinosvikapo ndipo pandinonzi yako kirasi yevana vasingaoni nevane utara haugoni kuiwana iye zvino. Kirasi iripo ndiye iya yevana vane hurema hwekusanzwa nekutaura. Ndakambosekera mudundundu zvangu ndakatarira vanhu ava. Ndakatarira ndokuona kuti vadzidzisi vose vaiva pachikoro apa vaisava vakadzidzira kudzidzisa vana vane hurema. Vaingova vadzidzisi asi kwete vevana vane hurema.
Chakanyanya kundigumbura ndechokuti zviya kana mudzidzisi achienda kuzororo kundozorora kwekotoro yose zvayo, anotsiviwa nemudzidzisi asina kudzidzira basa. Mwana zvake arikubva kuchikoro asati amboziva kuti vana vanobatwa sei. Iyeye ndiye anozi ngaaende andotsiva mudzidzisi aenda kuzororo. Vana vanopedza kotoro yese vasina chavadzidza. Iye ndiye unonge achitodzidziswa navana. Vana vanenge vachigona kushandisa muchina wekunyora nawo weBraille asi iye anenge asingagoni. Vana vanenge vachigona kushandisa mutauro wezviratidzo asi mudzidzisi vanenge vasingazivi.
Zvinobatsira ani izvozvi? Vana vedu havana chavanowana apa. Ipapo ndipowo paunonzwa vanhu vakare ivavo vava kunzi ndivo vanonzwira tsitsi vana vane hurema. Kundinyepera. Handidi kunyeperwa ini. Vana vane hurema vanofanira kudzidziswa navanhu vakura vapwe mhepo. Vanhu vava neudzamu hwepfungwa uye vanoziva kuti varikuveza ramangwana revana kwete izvi zvamatakanana. Kana kuvaremekedza vanhu vanouraya ramangwana ravana vangu ava kwete. Handigoni kuremekedza munhu anouraya vanhu vakawanda kudai nekukanganisa kwezuva rimwe chete. Handidi.
Chimwe chondinetsa chikuru ndechekuti pazvikoro zvedu tine dambudziko rezvekushandisa. Kana munhu anoda kutibatsira nezvekushandisa akauya zvonzi tiudze vakuru vekubazi rezvedzidzo. Kana taenda ikoko tsamba dzedu dzinogarirwa kwemwedzi mizhinji chaizvo dzisina kupindurwa. Ukapinda mune iyi hofisi wonzi enda mune iyo imomo wonzizve enda mune iyo. Unongoramba uchitenderedzwa muswere wezuva wose usina chaipoipo pawabatsirwa. Apa vana nguva inenge ichifamba vasina kuwana rubatsiro. Izvo zvacho zvavanofanira kuwana vanenge vasina kuzviwana. Vakuru vanozviti vakuru vakagarira mhinduro. Anoda kubatsira anopedzesera awora moyo akazviregawo.
Saka toti zvinobatsira izvozvi? Hapana chiripo apa? Hapana apa. Ndivo vanototadzira vana pane kuvachengetedza.
Kutaura kwaJoromiyo vakomana navasikana imi! Hanzi, zvamunoparidza shoko muchiti munonamata madzimoni, ndiyani asingnamati madhimoni? Kereke dzamunonamatira dzine mazita adzo ndiana St John, St Peter, St Parick, ko varidzi vemazita iwaya vapenyu here? Ko iyo migwagwa yamunoshofera magarimoto enyu handiti akazara namazita avafi? Ndiyani asingazvizivi? Kana iyo midhuri yamunoshandira mahofisi enyu? Asingazivi kuti mazita acho ndeevafi ndiyani? Pedzezvo kana mava mumakereke motuka vamwe muchiti tonama madhimoni? Imi vanhu kwanai. Itai mushe? Nemiwo munonamata madhimoni.
Joromiyo andifungisa kukereke mufundisi Mabhande vachiparidza shoko rokunamata mweya yesvina. ipapo vachikanda mavoko avo uko nekoko vachitambatamba kunge murwi wetsiva ari kugadzirira kukanda zvibhakera. Furo richipupuma namativi emuromo izvozvo uku mudzimai wavo akapfugama achinamata. Murume mukuru anenge achiyerera ziya izvozvo misodzi ichiyerera achituka mweya yemadzinza yose yevanasekuru, vana tete, nana mbuya vakafa karekare. Achivaraira kuti vapiswe nemoto naJesu.
Anongogumira pakuti Jesu.hazvina anobvunza kuti Jesu uyu ndiye Jesu Kristu here kana kuti anongoriwo umwe Jesu mudzimu wemunhu akafa kare. Kana ari Jesu Kristu sei mufundisi Mabhande asingatauri zita racho rese richizara? Pane nyaya ipapa. Kuti ingava nyaya yekudimburira mazita here? Chii chaizvo? Ndakzvitarira ndikaona kuti Joromiyo ane nyaya. Kanapo zvayo isiri yechokwadi, asi ane nyaya. Nyaya inoda kunyatsotariswa zvakadzama.
Panopedza mufundisi kuparidza vanobva nasheedzera kuti vanhu vose vuyai ndikupei minana yenyu. unoona vanhu vose vachiiti dungwe rongondo kuenda kundonamatirwa kuti vawane kugashira minana yavo. Vanenge vachida kugashidzwa minana namufundisi Mabhande. Mufundisi Mabhande vane vamwe vakadzi vaviri vanouya vachitora zvokudya muchitoro chavo vasina kubhadhara vachiti vanoda kundochengeta vana vamufundisi. Ivo mufundisi vannongoita sokuti havana chavanoziva. Zvino vashandi vacho vava kutorawo zvitengeswa zvamufundisi vachinyora kuti madzimai evana vamufundisi ndiwo atora. Mufundisi vanongogutsirira musoro vachiratidza kuti havana chokutaura. Vanenge vava kutotya kuti vakati bufu chipande chavo chobuda pachena.